ကိုဗစ် ကို တားဆီးနိုင်တဲ့ ပဋိဇီဝပစ္စည်း တမျိုးကို ရှာတွေ့ပြီဟု အမေရိကန် ကုမ္ပဏီကြေညာ – Let Pan Daily
Let Pan | May 16, 2020 | Knowledge, World News | No Comments
အမေရိကန် ဆေးသုတေသန ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဟာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ရဲ့ ထိုးနှက်မှုတွေကို ကာကွယ် တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ ပဋိဇီဝ ပစ္စည်း တစ်မျိုးကို တွေ့ရှိထားကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ ပဋိဇီဝ ပစ္စည်းကို လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ထိုးသွင်းပေး လိုက်ရင် လေးရက်အတွင်းမှာတင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိမယ့် ကိုယ်ခံ အားမျိုး တည်ဆောက်ပြီးသား ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ကယ်လီဖိုးနီယားပြည်နယ် အခြေစိုက် ဆော်ရန်တို ဆေးသုတေသန ကုမ္ပဏီရဲ့ ပညာရှင်တွေက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆန်ဒီယေဂိုမြို့က ကုမ္ပဏီ ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ စမ်းသပ်မှုတွေ အရ STI-1499လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ပဋိဇီဝ ပစ္စည်းဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရာနှုန်းပြည့် ကိန်းအောင်းပြီး တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကုမ္ပဏီရဲ့ အမှုဆောင်ချုပ် ဒေါက်တာ ဟန်နရီဂျီက တကယ် လို့သာ လူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရောဂါကာကွယ်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ခံအား ကြိုတင် ကိန်းအောင်းနေပြီဆိုရင် အချင်းချင်း နီးနီးကပ်ကပ် မထိတွေ့ဖြစ်အောင် ရှောင်နေရတာမျိုး၊ ရောဂါမကူးအောင် နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ဆင်ခြင် ကာကွယ်နေရတာမျိုးတွေ မလိုအပ်တော့ဘူး လို့ ပြောကြားသွားပါတယ်။
ယခုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ပဋိပစ္စည်းဟာ ဆိုရန်တိုပကုမ္ပဏီက နယူးယော့ခ်ရှိ Mt Sinai School of Medicine နဲ့ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်နေတဲ့ ဆေးအတွက် ပေါင်းစပ်သွားမယ့် ပဋိပစ္စည်းတွေထဲမှ တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “ကုထုံးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အလေးအနက် ဖော်ပြချင်ပါတယ်၊ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အလုပ်ဖြစ်တဲ့ အဖြေတ စ်ခုရှိ ပါတယ်” လို့ ဆိုရန်တိုကုမ္ပဏီ စီအီးအို ဒေါက်တာဟင်နရီဂျီက ပြောပါတယ်။
HAMBURG, GERMANY – APRIL 16: An employee showsablood sample for Covid-19 antibody testing at the Labor Dr. Heidrich & Kollegen MVZ GmbH medical lab on April 16, 2020 in Hamburg, Germany. The Heidrich lab, one of approximately 130 medical labs in Germany doing Covid-19 testing, is processing on average over 100 testsaday, both from people who use the lab’s at-home swabbing kit and from samples arriving from local medical practices. Germany so far has over 130,000 confirmed cases of Covid-19 infection, approximately 62,000 people have recovered and 3,804 have died. (Photo by Morris MacMatzen/Getty Images)
လက်ရှိမှာ ကုမ္ပဏီအနေ နဲ့ အမေရိကန် FDA ထံမှ အရေးပေါ်အခြေအနေ အတွက် ခွင့်ပြုပေးရန် လျှောက်ထားတင်ပြထားကြောင်းနဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရရှိသေးကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ဟန့်တားပေးနိုင်တဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ ပဋိပစ္စည်းဆေးကို တစ်လလျှင် ၂၀၀,၀၀၀ အထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဆိုရန်တိုကုမ္ပဏီ က COVID-19 ကို ရာနှုန်းပြည့် ဟန့်တားနိုင်တဲ့ ပဋိပစ္စည်း တွေ့ရှိ ထားကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက် စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်မှာ ၎င်းရဲ့ ရှယ်ယာဈေးနှုန်းဟာ ၂၄၄ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ထိုးတက် သွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်အထိ COVID-19 ကုသဆေးနဲ့ ကာကွယ်ဆေး အတည်ပြု ထွက်ပေါ်လာနိုင်ရန် ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းမှာ အချိန်လု ကြိုးပမ်းနေကြဆဲဖြစ်ပြီး လူတွေနဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ယမန်နှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်က တရုတ်အလယ်ပိုင်း ဝူဟန်မြို့မှာ စတင်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ COVID-19 ကြောင့် ယနေ့ (မေ ၁၆ ရက်) မနက်ပိုင်း အထိ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း လူ ၃၀၀,၀၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းမှာ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ အရေအတွက်ဟာလည်း နေ့စဉ် တိုးလာနေဆဲဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ ၄.၆ သန်းကျော်လွန်လာပြီဖြစ်ပြီး ပြန်လည်သက်သာသူ ၁.၇ သန်းကျော် ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အမရေိကနျ ဆေးသုတသေန ကုမ်ပဏီ တဈခုဟာ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ ရဲ့ ထိုးနှကျမှုတှကေို ကာကှယျ တားဆီးပေးနိုငျတဲ့ ပဋိဇီဝ ပစ်စညျး တဈမြိုးကို တှရှေိ့ထားကွောငျး ကွညောခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီ ပဋိဇီဝ ပစ်စညျးကို လူ့ခန်ဓာကိုယျထဲ ထိုးသှငျးပေး လိုကျရငျ လေးရကျအတှငျးမှာတငျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈရဲ့ ဒဏျကို ခံနိုငျရညျရှိမယျ့ ကိုယျခံ အားမြိုး တညျဆောကျပွီးသား ဖွဈလာနိုငျကွောငျး ကယျလီဖိုးနီယားပွညျနယျ အခွစေိုကျ ဆျောရနျတို ဆေးသုတသေန ကုမ်ပဏီရဲ့ ပညာရှငျတှကေ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဆနျဒီယဂေိုမွို့က ကုမ်ပဏီ ဓာတျခှဲခနျးမှာ စမျးသပျမှုတှေ အရ STI-1499လို့ နာမညျပေးထားတဲ့ ပဋိဇီဝ ပစ်စညျးဟာ လူ့ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ရာနှုနျးပွညျ့ ကိနျးအောငျးပွီး တုံ့ပွနျနိုငျစှမျး ရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။
ကုမ်ပဏီရဲ့ အမှုဆောငျခြုပျ ဒေါကျတာ ဟနျနရီဂြီက တကယျ လို့သာ လူတှရေဲ့ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ရောဂါကာကှယျနိုငျတဲ့ ကိုယျခံအား ကွိုတငျ ကိနျးအောငျးနပွေီဆိုရငျ အခငျြးခငျြး နီးနီးကပျကပျ မထိတှဖွေ့ဈအောငျ ရှောငျနရေတာမြိုး၊ ရောဂါမကူးအောငျ နညျးလမျးပေါငျးစုံနဲ့ ဆငျခွငျ ကာကှယျနရေတာမြိုးတှေ မလိုအပျတော့ဘူး လို့ ပွောကွားသှားပါတယျ။
ယခုတှရှေိ့ခဲ့တဲ့ ပဋိပစ်စညျးဟာ ဆိုရနျတိုပကုမ်ပဏီက နယူးယော့ချရှိ Mt Sinai School of Medicine နဲ့ ပူးပေါငျးထုတျလုပျနတေဲ့ ဆေးအတှကျ ပေါငျးစပျသှားမယျ့ ပဋိပစ်စညျးတှထေဲမှ တဈမြိုးဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ “ကုထုံးတဈခုရှိတယျဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ အလေးအနကျ ဖျောပွခငျြပါတယျ၊ ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျး အလုပျဖွဈတဲ့ အဖွတေ ဈခုရှိ ပါတယျ” လို့ ဆိုရနျတိုကုမ်ပဏီ စီအီးအို ဒေါကျတာဟငျနရီဂြီက ပွောပါတယျ။
လကျရှိမှာ ကုမ်ပဏီအနေ နဲ့ အမရေိကနျ FDA ထံမှ အရေးပျေါအခွအေနေ အတှကျ ခှငျ့ပွုပေးရနျ လြှောကျထားတငျပွထားကွောငျးနဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြမရရှိသေးကွောငျးလညျး သိရပါတယျ။ COVID-19 ဖွဈပှားမှုကို ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျး ဟနျ့တားပေးနိုငျတဲ့ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ ပဋိပစ်စညျးဆေးကို တဈလလြှငျ ၂၀၀,၀၀၀ အထိ ထုတျလုပျပေးနိုငျကွောငျးလညျး ၎င်းငျးက ပွောခဲ့ပါတယျ။
ဆိုရနျတိုကုမ်ပဏီ က COVID-19 ကို ရာနှုနျးပွညျ့ ဟနျ့တားနိုငျတဲ့ ပဋိပစ်စညျး တှရှေိ့ ထားကွောငျး ပွောဆိုခဲ့ပွီးနောကျ စတော့ရှယျယာဈေးကှကျမှာ ၎င်းငျးရဲ့ ရှယျယာဈေးနှုနျးဟာ ၂၄၄ ရာခိုငျနှုနျး အထိ ထိုးတကျ သှားခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျအထိ COVID-19 ကုသဆေးနဲ့ ကာကှယျဆေး အတညျပွု ထှကျပျေါလာနိုငျရနျ ကမ်ဘာ တဈဝှမျးမှာ အခြိနျလု ကွိုးပမျးနကွေဆဲဖွဈပွီး လူတှနေဲ့ စမျးသပျမှုတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ ယမနျနှဈ ဒီဇငျဘာလကုနျက တရုတျအလယျပိုငျး ဝူဟနျမွို့မှာ စတငျတှရှေိ့ခဲ့ရတဲ့ COVID-19 ကွောငျ့ ယနေ့ (မေ ၁၆ ရကျ) မနကျပိုငျး အထိ ကမ်ဘာတဈဝှမျး လူ ၃၀၀,၀၀၀ ကြျော သဆေုံးခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာ တဈဝှမျးမှာ COVID-19 ကူးစကျခံရသူ အရအေတှကျဟာလညျး နစေ့ဉျ တိုးလာနဆေဲဖွဈပွီး လကျရှိမှာ ၄.၆ သနျးကြျောလှနျလာပွီဖွဈပွီး ပွနျလညျသကျသာသူ ၁.၇ သနျးကြျော ရှိခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။